ချီယာစေ့ (Chia Seeds) နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)နည်း - Lifestyle Myanmar
ချီယာစေ့ (Chia Seeds) နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)နည်း
in Food, Health & Beauty, Lotaya
ချီယာစေ့တွေကို အစားအစာနဲ့ အာဟာရကမ္ဘာမှာ စူပါအစားအစာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာ သင်သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ချီယာစေ့လေးတွေက ပင်ပွားစေ့တွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ချီယာစေ့တွေက ပရိုတင်းဓါတ်၊ အရည်အသွေးမြင့် ဖိုင်ဘာဓါတ်၊ အိုမီဂါ ၃ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေ၊ ကယ်လစီယမ်ဓါတ်တွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ကောင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ချီယာစေ့တွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် ကြိုးစားနေသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ချီယာစေ့တွေက အာဟာရဖြည့်တင်းပေးရုံသာမက အမျှင်ဓါတ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် နာရီပေါင်းများစွာ ဗိုက်ပြည့်နေစေပြီး အစာအာဟာရကောင်းမွန်စွာစားဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ပရိုတင်းဓါတ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် အဆီကို လောင်ကျွမ်းစေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို တိုးစေပါတယ်။ ချီယာစေ့တွေက ကိုယ်အလေးချိန်ကျလိုသူတွေအတွက် နေ့စဉ်အစားအစာမှာ ထည့်သွင်းစားလို့ရမယ့် အစားအစာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဘယ်လိုစားကြမလဲ?
၁။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဖျော်ရည်ထဲမှာ ချီယာစေ့လေးတွေ ထည့်သောက်ပါ။ အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုက ဒိန်ချဉ်၊ ငှက်ပျောသီး၊ စတော်ဘယ်ရီနှင့် ချီယာစေ့တွေဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ချီယာစေ့တွေကို အသုတ်ထဲမှာ နှမ်းထည့်သလို ထည့်စားပါ။ အရွက်သုတ်တွေထဲမှာ ထည့်နယ်ပြီး စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အပေါ်ကဖြူးပြီး စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အံ့သြဖွယ်အရသာလေးကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။
၃။ ပန်ကိတ်စားရတာ ကြိုက်ပါသလား? ချီယာစေ့တွေကို ပန်ကိတ်တွေထဲမှာ ထည့်လို့ရပါသေးတယ်။ ပန်ကိတ်က နံနက်စာအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အရသာရှိတဲ့ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရလည်းဖြစ်စေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်လည်း ကျစေပါတယ်။
၄။ အိမ်လုပ်အချိုပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့ ချီယာစေ့တွေ သုံးပါ။ ချီယာစေ့တွေကို အချိုပွဲအမျိုးမျိုးမှာ ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ကိတ်မုန့်၊ ပူတင်း၊ ကျောက်ကျောလုပ်တဲ့အခါ ထည့်နိုင်ပါတယ်။ oatmeal, ချီယာစေ့, သစ်ကြားသီးနှင့် ပျားရည်ကိုသုံးပြီး မြေပဲနှမ်းကပ်မုန့်မျိုးလို လုပ်စားလို့ရပါတယ်။
၅။ အနံအရသာရှိတဲ့ ဒိန်ချဉ်ထဲမှာ ဇီယာစေ့ကို ထည့်စားပါ။ ချီယာစေ့ကို ပုံမှန်စားဖြစ်ဖို့ ရိုးရိုးဒိန်ချဉ်ပေါ်မှာ ဖြူးစားလို့ရပါတယ်။ ရေခဲမုန့်နဲ့တောင် စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။
၆။ အာလူးနဲ့လည်း တွဲစားလို့ရပါတယ်။ နှမ်းထည့်မယ့်နေရာမှာ ချီယာစေ့တွေကို အစားထိုးဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ချီယာစေ့ကို အားလူးဟင်း ၊ မီးဖုတ်ထားတဲ့အာလူး၊ အာလူးကြော်၊ အာလူးသုပ်စသဖြင့် ထည့်နိုင်ပါတယ်။
၇။ ချီယာစေ့ကို နံနက်ခင်း Detox Water အဖြစ်သောက်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါက ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ detox အချိုရည်ဖြစ်ပြီး အင်ဇိုင်းများပါဝင်ပါတယ်။ ရေနွေးပူပူတစ်ခွက်ထဲမှာ ချီယာစေ့ ထမင်းစားဇွန်း ၁ဇွန်းနဲ့ သံပုရာသီးတစ်ခြမ်းညှစ်ပြီး ထည့်ပါ။ ပန်းသီးရှာလကာရည် တစ်ဇွန်းထည့်မွှေပါ။ ဒီ Detox Water ကို နံနက်ပိုင်းမှာ အရင်သုံးသောက်သုံးပါ။
၈။ ချီယာစေ့ကို အုန်းနို့နဲ့လုပ်တဲ့ မုန့်တွေထဲထည့်ရင် အရမ်းလိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကွေကာ၊ အုတ်ဂျုံ၊ ဒိန်ချဉ်၊ နွားနို့စတာတွေထဲမှာ ထည့်စားလို့ရပါတယ်။
၉။ lactose intolerance (နို့နဲ့မတည့်သူတွေ) ရှိသူတွေအနေနဲ့ အုန်းရည်ထဲမှာ ထည့်သောက်နိုင်ပါတယ်။ ချီယာစေ့ကို အုန်းရေ (သို့) အုန်းနို့ထဲမှာ တစ်ညလောက်စိမ်ထားပြီး သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ ပရိုတင်းနှင့် အမျှင်ဓါတ်တွေ ပါဝင်စေဖို့ သဘာဝအသီးဖျော်ရည်ထဲမှာ ချီယာစေ့တွေ ထည့်စိမ်ပြီး သောက်ပေးပါ။
Detox လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ မျက်နှာ ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲ Detox (အဆိပ်ထုတ်ခြင်း) လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ Chemical တွေပါတဲ့ ဆံပင်ဆိုးဆေးတွေ၊ ကောက်ဆေး၊ ဖြောင့်ဆေးတွေကြောင့် ဆံသားခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေပြီဆို သင့်ဆံသားတွေထဲက chemical အကြွင်းအကျန်တွေနဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို detox...